नेपाली राजनीतिमा ‘बा’ चिन्तन « Drishti News – Nepalese News Portal
नेपाली राजनीतिमा ‘बा’ चिन्तन
१५ आश्विन २०७८, शुक्रबार 8:57 pm
‘मैले धेरै पढेँ
आमाका वेदनाका कथाहरु
आमाकै तारिफमा कविता कोरे
आमाकै गीतसङ्गीत भरे
बा सधैँ ओझेल परे’ (बा, नीरा शर्मा)
सन्तान जन्माएर मात्र बुबा बनिन्न, बुबाको कर्तव्य पूरा हुँदैन । तिनलाई हुर्काउन र असल शिक्षा नदिएसम्म वास्तविक बुबा बन्न सकिँदैन । त्यसैले त बुबा सधैँ तनावमा हुन्छन् । पसिना चुहाएर ओभानो बस्नै पाउँदैनन् ।
सन्तानका लागि बुबा कहिल्यै दुष्ट हुँदैन । पेटभर खान र लाउन दिने त बुबा नै हुन् । कमाएर ल्याएपछि न आमाले दिने हुन् (पहिलेका कुरा, अहिलेका आमा त आफैँ कमाउन लागेका छन्, यो बेग्लै कुरा हो) । बुबाको स्वार्थ होला, यो छोरा पढ्ला, कमाइ गर्ला, पेटभरि खान देला मलाई । तथापि, बुबा कमाउन हिँडेको छोराका लागि नै हो । सत्तरी वर्षका शिव भट्ट पनि गर्भमा बसेको छोरा नजन्मिँदै कमाउन परदेश गए, कति दूरदर्शी बुबा ।
बिनाबुबाका छोराहरु कमै असल होलान् । असल बुबाले असलै शिक्षा र प्रेरणा दिएर सन्तानलाई उँभो लगाउँछन् । बुबा कहिल्यै दुष्ट हुँदैन भन्छन् तर दुष्ट बुबा परे भने कुलाङ्गार सन्तान बन्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । खानलाउन दिन नसकिने भएर भागेका बुबा कति छन् कति ? छोरी जन्मेको भनेर फालेर हिँड्ने बुबाआमा नै पनि बग्रेल्ती छन् यही समाजमा ।
कसैका बुबा बितेछन् । एउटा बुझक्कडीले मृतकका रुञ्चे छोरालाई सम्झायो, ‘हेर् संसारमा सबैको अन्त्य हुन्छ । भक्कानो छाडेर किन रुन्छस् । अज्ञानी हुनुहुँदैन । अब बुबाले छाडेर गएको काम पूरा गर् ।’ अर्काे पटक त्यही सम्झाउन गएको केटाको बुबा बिते । पहिले बुबा बितेको केटो पनि सम्झाउन आयो आफूलाई सम्झाउन आउने साथीलाई ।
पहिलेको केटाले भनेछ, ‘तेरो बुबा जस्तो हो र मेरो ।’ यति भनेर ऊ झन् गाउँ थर्काउने गरी रुन थालेछ । संसारमा सबैका बुबा प्रिय नै हुन्छन् । बुबा सन्तानका लागि घोडा बनिदिन्छन् । गधा र गोरु बनेर थिचिइन्छन् । अहिलेका सन्तान आफ्ना बुबाले नकमाएको, जग्गाजमीन नजोडेको, शक्तिवाला नभइदिएकामा सत्तोसराप गर्छन्, अंश माग्छन् र वृद्धाश्रममा लगेर थन्काइदिन्छन् ।
कृष्णप्रसाद कोइराला पिताजी, गणेशमान टबा भए भने, केपी ओलीसम्म पुग्दा ‘बा’ शब्द चर्चित भयो । कम्युनिष्ट पार्टीमा ‘बा’ प्रवृत्तिको माधवबुबाले खोइरो खने र टिक्न नसकेर आखिर आफू नै बाका घरबाट निक्लिएर हिँडे ।
गाउँमा रहेका बुबाआमालाई फर्केर हेर्दैनन्, बुबा खुवाउने औंसीमा एक दिन फोन गर्छन् । श्राद्ध सकिएपछि भट्टीमा रक्सी र मासु भोजन गर्ने छोराहरु पनि यहाँ छन् । अर्बाैँमा श्रवणकुमार भेटिन सिलो नै खोज्नुपर्ला । बुबाआमालाई पुंसिक नर्कबाट तार्ने छोराछोरी तथा सन्तानलाई पालन र रक्षा गर्ने बुबाआमा भेटिनु संयोग मात्र हुने छ ।
नेपाली कूटनीतिमा भारतको ठूल्दाइ प्रवृत्ति कायम छँदैछ । पुष्पलाल माइलादाइ, वीपी सान्दाइ र सुशीलदा’ भए । सूर्यबुबा, कीर्तिबुबा, गिरिजाबाबु, पशुपतिराजा, मनमोहन कामरेड, तुलसीलाल, मदन भण्डारी, प्रचण्ड भए । कृष्णप्रसाद भट्टराई किसुनजी भए (गणेशमानका भाषामा गङ्गादास, जमुनादास पनि) । कृष्णप्रसाद कोइराला पिताजी, गणेशमान टबा भए भने, केपी ओलीसम्म पुग्दा ‘बा’ शब्द चर्चित भयो । कम्युनिष्ट पार्टीमा ‘बा’ प्रवृत्तिको माधवबुबाले खोइरो खने र टिक्न नसकेर आखिर आफू नै बाका घरबाट निक्लिएर हिँडे ।
राजा जनक आखिर सबैका जनक भए आफ्नो ज्ञान र ज्ञानको भोकले । एकै बुबाका तीन छोरा प्रधानमन्त्री नेपालमा भए, कस्ता भाग्यमानी बुबा ? फाँसीमा चढेका शुक्रराजका बुबा माधवराजले छोरालाई तीन चोटि परिक्रमा गरे र भने, छोरा हुनु त यस्तो पो । दिव्या कोइरालाले कारागारमा २९ दिन अनशन बसेका छोरा वीपीको सराहना नै गरिन् । श्रीमतीको वचन हार्न नसकेर राजा हुन लागेका छोरा रामलाई १४ वर्ष वनबास पठाउने दशरथ पनि बा, आफू जीवितै हुँदा छोरालाई राजगद्दी त्याग्ने जापानका सम्राट हिरोहितो पनि बा ।
बुबा पनि आखिर बलात्कारी हुँदा रेछन्, यो कलियुगाँ । त्रेतायुगमा रावणले आफ्नै छोरी सीतालाई अपहरण गरेर रानी बनाउन खोजेको कुरालाई चाहिँ के भन्ने ? अरुका अघि आफूलाई सधैँ गाली गर्ने पितालाई काट्न लागेका भारवीले आमासँग आफ्नो प्रशंसा गरेको सुनेर पश्चात्ताप गरे । बुबाले छोरालाई पुल्पुल्याउनुभन्दा त गाली गरेकै बेस नि । भानुभक्तले आफ्ना छोरा रमानाथलाई कान्तिपुरबाट चिठ्ठी लेखेर नपढेमा ठाउँको ठाउँ ठहरै पार्ने चेतावनी दिए ।
कुनै ‘बा’ धर्मपुत्र पालेर सक्कली छोराहरुलाई गुण्डागर्दीमार्फत तह लाउँछन् भने कुनै ‘बा’ कान्छी पत्नी ल्याएर जेठीका छोराहरुलाई बुबाको बिहे देखाइदिन्छन् । राजालाई आफ्ना बुबासरह मान्ने नेपाली युवा २८ साल र ५८ सालमा राजाको निधनपछि मुडुला टाउकामा देखा परे । चिनियाँ राजा कुब्ला खाँले हाम्रा बलबाहुलाई एकपल्ट ‘तिमीलाई मसँग बस्दा डर लाग्दैन ?’ भनी सोधे । अरनिकोले भनिदिए, ‘हामी त आफ्ना राजालाई बुबा जस्तै मान्छौँ, बुबासँग बस्न केको डर ?’ तिनै कलाकारले चीनमा विशाल हजारौँ मूर्तिहरु बनाएर नेपालको नाम विश्वमै दर्ज गराइदिए । ‘बा’ पनि हेर्नाका हुन्छन् । काखा र पाखा गर्ने ।
नेपालीबाबा, कालिबाबा देखाएर हिन्दू राज्य झार्न सकिन्थ्यो कि भन्ने चिन्तन एकाथरिमा छ भने ‘बुवा हजुर’लाई बेलाबेला मिडियामा ल्याएर राजतन्त्र फेरि गाड्न पाइने लालसा अर्काथरिमा छ । लौ है, बाहरुलाई बचाऔँ, बाहरुबाट बचौँ । हाम्रा बा, बुबा, बाउहरु महान् छन् । आमाहरुको मात्र गुनगान कति गाउनू ?
‘…तर आज मेरा बाका
सहयोद्धाहरु फर्किएका छन्
कुनै बेला रातो झोलामा
कम्युनिष्ट घोषणापत्र बोकेर आउने
मेरा बाका सहयोद्धाहरु
आज रातो नम्बर प्लेटको बहानामा
धुलो उडाउँदै आएका छन्
सडक छेवैमा उभिएको म
बाका सहयोद्धाले उडाएको धुलोलाई
नियालेर हेर्छु नजीकबाट
धुलोमा मिसिएका राता कणहरु
मेरो बाका रगतका थोपाहरु त हैनन् ?’ (‘बा’, अटल आचार्य, जाजरकोट